15 / 07 / 2021 15 / 07 / 2021 ရော့ Paton 599 Views စာ0မှတ်ချက် 7163 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship, 75145 နေကြတ်တိုက်လေယာဉ်, 75267 Mandalorian တိုက်ပွဲ Pack ကို, 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship, 75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauder, အဆိုပါ Clone ၏တိုက်ခိုက်, အုတ်ခဲ, တည်ဆောက်, Clone Trooper ဖြစ်သည်, Clone Trooper တပ်မှူး, သီးသန့်တည်ဆောက်ခြင်း, ဘူမိဗေဒ, Greef Karga, Jedi Bob, Lego, Lego Minifigures, Lego Star Wars, တင်းပုတ် Windu, အသေးစား, သေးသေးလေး, Obi-wan kenobi, သမ္မတနိုင်ငံ Gunship, Star Wars, Star Wars: Clone ၏တိုက်ခိုက်မှု, အဆိုပါ LEGO Group, UCS, UCS သမ္မတနိုင်ငံ Gunship, Ultimate စုဆောင်းစီးရီး, Wookieepedia
75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship Jedi Bob မပါဘဲမပြည့်စုံဘူးဟုခံစားရသည် Lego Star Wars အဖွဲ့ကသူ့ကိုမပါဝင်နိုင်, Brick Fanatics ဒီအထင်ကရ, ဒဏ္characterာရီဇာတ်ကောင်တစ် ဦး updated update ကိုဗားရှင်းအတူတကွအပိုင်းပိုင်း။
Jedi Bob သည်သူသည်ထိုအဖြစ်အပျက်ပြီးနောက်ချစ်ခင်ဖွယ်ကောင်းသူအဖြစ် ၂၀၀၂ ခုနှစ် ၇၁၆၃ သမ္မတ Gunship ကို Geonosis ဆိုင်ရာယေဘူယျကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်ပထမဆုံးအကြိမ်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးယနေ့ထိတိုင်လုံးဝအိပ်မက်မက်ခဲ့ဖူးသည်။ Lego Group မှ။
အဆိုပါရွှင်လန်း Jedi ကတည်းကဆင်းသွားပြီ Lego Star Wars သမိုင်းနှင့်ပင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ရှိပါတယ် Wookieepedia စာမျက်နှာ။ အတွက် updated ဗားရှင်းအပါအဝငျ 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship အဓိကဇာတ်ကောင်များ၏ Attack of the Clones အစုံနှင့်ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြသည့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ - ခေါင်းစဉ်၏အတိတ်ကိုအပြည့်အဝသဘောပေါက်နိုင်သော်လည်းဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည် Mace Windu နှင့်ယေဘူယျ Clone Trooper Commander တို့၏အခွင့်အရေးကိုရယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ဒါပေမယ့်ဘယ်တော့မှမကြောက်ပါနဲ့ - ကျွန်ုပ်တို့မှာရရှိနိုင်ပြီးသားသုံးပြီးနောက်အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးဗားရှင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ် Lego parts.
Jedi Bob ကိုအတူတကွထားခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီး၊ ကွဲပြားခြားနားသော p ရှစ်ခုသာလိုအပ်သည်arts မှကွဲပြားခြားနားသောအောင်မြင်မှုဒီဂရီအထိသင်ရှာတွေ့နိုင်သည် Lego parts catalog ။
အသုံးအများဆုံးသောအချက်များမှာ lightsaber blade နှင့် hilt, အညိုရောင်ပါးပျဉ်းနှင့် minifigure ခြေထောက်များနှင့်အလင်း nougat လက်များဖြစ်သည်။ မှောင်မိုက်အညိုအငူတစ် ဦး တည်းသာပေါ်လာခဲ့သည် Lego သတ်မှတ်75267 Mandalorian တိုက်ပွဲ Pack ကို), အနိမ့်ရုပ်ပုံကိုယ်ထည် (75145 Eclipse တိုက်လေယာဉ်), မူလကအမျိုးသမီး Jedi / Sith ဇာတ်ကောင်များအတွက်ထုတ်လုပ်ပေမယ့်ဒီနေရာမှာနည်းတူအလုပ်ဖြစ်တယ်ခဲ့သည့်ရှိပါတယ်။
ခေါင်းသည် Obi-Wan Kenobi Minifigure ဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်ကထုတ်လုပ်မှုနောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး 2016 torso နှင့်အတူ Jedi Bob အားပြီးမြောက်ရန်မှာစိန်ခေါ်မှုဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။
သင်သည်များစွာသောဖန်တီးနိုင်သည့်အခါ Jedi Bob တစ်ယောက်အဘယ်ကြောင့်ရှိသနည်း။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာထုတ်ခဲ့တဲ့မူရင်းရုပ်ပုံကားချပ်ဟာအဲဒီကာလအတွင်းဖြစ်ခဲ့တယ် Lego Star Wars အဝါရောင်အရေပြားအသေးအဖွဲပုံစံများဖြစ်သည့် Jedi Bob အားသူကော့ကေးဆပ်လူမျိုးဖြစ်ကြောင်းသတင်းပို့သောအခါမည်သူပြောရမည်နည်း။ ထိုအမှုအဘို့, 2021 များအတွက် updated Jedi Bob အမျိုးသမီးမဖြစ်နိုင်မည်နည်း
ခေါင်းနှင့်လက်များကိုလဲလှယ်ခြင်းဖြင့်အခြားမည်သည့်ရွေးချယ်စရာမဆို Jedi Bobs ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးသုံးခုမှာ Greef Karga ၏မျက်နှာသေးပုံသဏ္fromာန်ဖြင့်သူ၏အသေးစားရုပ်ပုံများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ 75311 Imperial သံချပ်ကာ Marauder.
p ကိုပေးထားသည်artကျွန်ုပ်တို့ဤနေရာတွင်သုံးသော icular torso သည် ၂၀၁၆ မှဖြစ်ပြီး၊ ယခုအချိန်တွင် BrickLink အပေါ်ကောက်ယူရန်ခဲယဉ်းသည်အခြားရွေးချယ်စရာကိုယ်ထည်တစ်ခုမှာ Gandalf ၏သေးငယ်သောရုပ်ပုံကားချပ်များဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဖြန့်ချိသောအခါ ပို၍ အဖြစ်များခဲ့ပြီးဒုတိယစျေးကွက်တွင်လည်း ၀ ယ်ယူရန် ပို၍ လွယ်ကူသည်။
အသစ်တီထွင်ထားသော Clone Troopers နှင့်ကပ်လျက်သင်၏အသစ်စက်စက်တီထွင်ထားသော Jedi Bob ကိုဆိုင်းငံ့ထားခြင်းသည် ၇၁၆၃ Republic Gunship ၏ဘုန်းအသရေအတွက်ကြီးမားသောဂုဏ်ပြုမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship လာမယ့်လကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာ။ ပရိသတ်မှရွေးချယ်ထားသော Ultimate Collector စီးရီးများအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကစစ်ဆေးပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသေးစိတ်သုံးသပ်မှုနှင့်သင်ယူပါ ဘယ်လိုဒီဇိုင်နာများအပေါ်အခြေချခဲ့သည် Mace Windu နှင့် Clone Trooper တပ်မှူး။
သငျသညျထိုအလုပျကိုတိုက်ရိုက်ထောကျပံ့နိုငျသညျ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego Star Wars (လာမည့်အပါအဝင်အစုံ 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunshipကျွန်ုပ်တို့၏တ ဦး တည်းကနေတဆင့် တွဲဖက်လင့်ခ်များ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
← ၇၅၃၀၉ Republic Gunship တွင်မည်သည့်အသေးစားပုံများထည့်သွင်းရန် LEGO ကမည်သို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်
ကြည့်ပါ။ Lego Star Wars 75309 Republic Gunship သည်အဘယ်ကြောင့်ဒီဇိုင်းဆွဲရန်အိပ်မက်ဆိုးဖြစ်ခဲ့ရကြောင်းအဖွဲ့ကရှင်းပြသည် →